Osisi Apple | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Osisi Apple
Na-eto eto ma na-elekọta chard, esi enweta ezigbo ihe ubi nke beets
Osisi dị otú a dị ka chard, ma ọ bụ osisi bekee, ka na-adịkarịghị na nkịtị. Ka ọ dịgodị, a na-enwe ekele dị ukwuu na mba Mediterranean. N'ebe ahụ, a na-eri ya na nsị nke nwere nsị, n'ihi na uru ya na ahụ mmadụ dị ntakịrị. N'isiokwu a anyị na-enye gị ndụmọdụ maka ịkụ na ịchekwa beets bekee n'ubi ubi.
Otu esi echebe "Melbu" site na pests na oria
Osisi Apple bụ otu n'ime osisi ndị dị n'ime ubi. E nwere ọtụtụ iche iche dị iche iche ripening na uto. Ka o sina dị, ha niile bụ ụlọ nkwakọba ihe bara uru nke vitamin. Otú ọ dị, iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi, onye na-elekọta ubi kwesịrị ịzọpụta osisi site na ọrịa na pests. Ihe isi ike Melba na ọgwụgwọ ha bụ Melba bụ ụdị osisi dị iche iche a maara nke ọma, nke a ma ama maka mkpụrụ osisi dị ụtọ ma dị elu.
Nkọwa, ịkụ na ịlekọta osisi apụl Gloucester
Apple Gloucester bụ ụdị ozuzu Germany, ihe si na Glockenapfel na Richard Delishes gafere. A gbanwere ụdị dị iche iche n'afọ 1951 na Germany. Enwere ike ịba uru dị iche iche nke ọma na mma na uto, yana ịchekwa mkpụrụ osisi. Nke a dịgasị iche iche nwere ezigbo hardiness winter, mana ezughị ntu oyi na-eguzogide.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na aphid pụtara na osisi apụl karịa ịgwọ osisi megide ọrịa
Aphids na osisi apụl nwere ike ịpụta na nnukwu ihe gbasara ya, ya mere onye ọ bụla chọrọ igbochi ha, ọ dị ezigbo mkpa ịma otú e si emeso ha. Aphid bụ obere ahụhụ, nke oke ya anaghị eru 4-7 mm, ma ọ bụ ya bụ ihe kachasị ize ndụ nke ubi na mkpụrụ a kụrụ. Ọtụtụ pests nke osisi apụl na-awakpo ihe ndị a na-asọ oyi kwa afọ, na-enwe nnukwu ihe nfụkasị.
Osisi Apple Ranetka: nkọwa nke iche iche iche
Ranetka bụ aha nkịtị maka ụdị dị iche iche nke osisi apụl, nke a nwetara site na nhọpụta nke a na-ewu ewu na Europe osisi apple na ntu oyi na-eguzogide ụdị osisi apụl Siberia Berry. Ihe na-esi na crossbreeding bụ obere osisi apụl ndị kachasị mma maka ihu igwe dị njọ ma bụrụ ndị dị elu site na mkpụrụ elu.
Mgbochi na-edozi: usoro, pụtara na nkwadebe maka ịchịkwa ọrịa
Taa, onye ọ bụla anaghị echebe ya dị ka nla nla. Ọ na-asọgharị n'ebe nile, ihe oriri na-ebute ma n'ala ndị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nakwa n'ala ala. Mgbe ụfọdụ, ị na-alụ ọgụ na-egbu oge ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ. Akuku ihe ojoo, otutu ugbua, oge na ego eji bibie nje a - onye obula choro igabiga nka.
Kedu esi edozi osisi apple mgbe okooko, ogwu
Maka n 'ugbo na otutu ihe ndi kuru n'ubi, o di nkpa inye ha nchedo n'oge kwesiri oria na pests. Ọ bụghị ihe dị iche na nke a bụ osisi osisi toro n'ubi. Karịsịa, ndị na-elekọta ubi na-enwekarị mmasị na ihe ịkwado apụl n'ihu na mgbe okooko.
Agrotehnika cultivation nke apụl "White ndochi"
Mkpụrụ nke "White ndochi" mbụ ripen si niile apple iche. Ha nwere uto na-atọ ụtọ ma dị mma maka jam, jam na nri ụlọ oriri ndị ọzọ. A na-ahụ ụdị dị iche iche n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla, ha dị mfe ịnọgide na-enwe ma ghara ịmepụta nsogbu na-enweghị isi. Ọ bụrụ na anyị nye ndị na-eto eto Apple osisi nke "Inye White" na nri na ịgbara mmiri n'oge kwesịrị ekwesị, osisi ahụ ga-ekele maka mkpụrụ osisi dị ukwuu n'afọ nke atọ mgbe ọ kụsịrị.
Kolonovidnye apụl: kere, na-elekọta, kwachaa
Nsogbu ebighi ebi nke ndị bi n'oge okpomọkụ bụ enweghị ohere. Achọrọ m ịkụ ihe dị ukwuu, mana saịtị ahụ nwere ókèala, ịkwesịrị iji nlezianya tụlee nkesa nke mpaghara ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkpachara anya n'ubi ahụ ọ dịkarịa ala kwa afọ, ọnụ ọgụgụ a agaghị arụ ọrụ na ubi ahụ. Osisi ọ bụla chọrọ ohere zuru oke maka usoro mgbọrọgwụ na okpueze.
Otu esi akụ ma gbasa osisi apụl "Medunitsa" n'ógbè ha
Osisi Apple "Medunitsa" - ihe kachasị ewu ewu n'oge okpomọkụ osisi apụl, nke a na-eji hardiness oyi na àgwà mara mma nke mkpụrụ osisi ahụ. Akụkọ banyere mkpụrụ osisi apụl dị iche "Medunitsa" Apple iche "Medunitsa" bred ihe karịrị afọ 50 gara aga. Ọkà mmụta sayensị S. I. Isaev gafere ụzọ abụọ: Cinnamon Striped na Welsey. A na-ewere ụdị dịgasị iche iche dị ka ihe dị ukwuu n'ihi na ọ na-eguzogide ọgwụ skaab.
Otu esi eto akwukwo osisi apple di iche "Sinap Orlovsky" n'ubi ya
Osisi osisi apple Orlovsky snop dị iche iche na-eji ndị na-elekọta ubi egwu kpọrọ ihe ọ bụghị naanị maka uto ya dị mma, ihe ngosi nke mkpụrụ osisi ahụ, ndụ ya dị ogologo, kamakwa n'ihi ịma mma nke osisi okooko. Akụkọ banyere nhọta nke apụl dị iche iche "Sinap Orlovsky" Ejiri akwụkwọ nri bụ "Sinap Orlovsky" bred na 1955 site na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịpụta Mkpụrụ nke All-Russian.
Ubi nke osisi apple "Northern Synapse": uru na odighi uru nke di iche iche, kota na ichekwa
Akuku oyi oyi nke "Northern Synpse" dị iche iche anaghị adị ala na ntinye na ụdị mmasị nke aristocracy nke Northern Hemisphere. Otú ọ dị, mmalite nke ìgwè a mere ka ọchịchọ nke imeziwanye mkpụrụ osisi ndị dị ugbu a, bụ nke a chọrọ maka ndị a ma ama. Ụdị dịgasị iche iche na-eguzogide ntu oyi, nke dị oke mkpa na mpaghara ebe ọnọdụ ihu igwe na-egbochi oge na-eto eto.
Otu esi eto osisi Zhigulevskoe n'ubi m
A na-achọ maka apụl n'oge ọ bụla n'afọ. Ma karịsịa n'oge oyi na mmalite oge opupu ihe ubi, anyị chọrọ ka apụl na-esi ísì ụtọ. Aṅụrịrịrịrịrịrịrịrịrị mkpụrụ osisi apụl. Ị nwere ike ịhọrọ apụl ndị dị na ya, ma ha dị oke ọnụ ma na-enweghi obi ụtọ. Ya mere, ịhụnanya pụrụ iche nke gardeners kwesịrị n'oge mgbụsị akwụkwọ iche, nke mesịrị ripen ma na-ọma echekwara.
Ugbo osisi apụl "Sun": ihe gbasara ntughari na ilekọta
Okpuru akwukwo ndu nke "Sun" bu ndi ndi oru ugbo na-achota n'ihi na ha di uto na mma idebe. Na-agba agba, ha na-acha uhie uhie na-achọ mmachi okpueze nke obere osisi. Tụkwasị na nke a, a na-ahụ ụdị dịgasị iche iche site na nhịahụ nke ugbo. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi eto osisi apụl "Sun" na saịtị gị, yana nyochaa isi uru na ọghọm dị iche iche.
A maara ụdị dịgasị iche iche na-elekọta ubi maka ihe karịrị otu narị afọ. N'oge gara aga, ọ na-anọ na ubi ọ bụla, ma taa, echefuola ya ntakịrị n'ihi ọtụtụ ụdị apụl ndị ọzọ. Otú ọ dị, ndị nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye ya, na-enweta ihe ubi nke osisi apụl ndị mara mma na uto dị mma. Nkọwa nke osisi apple tree "Cinnamon Striped" Iji ghọta uru nke ogige osisi ahụ, ị ​​kwesịrị iji nlezianya nyocha nkọwa nke cultivar "Mkpịsị osisi cinnamon".
Nzuzo nke ihe na-aga nke ọma nke osisi apple "Bashkir Beauty"
Ịhọrọ ụdị ụdị apụl nke na-eto eto n'ubi m, Achọrọ m ka o nwee anya dị mma, mkpụrụ osisi dị ụtọ na, n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe, na-eweta owuwe ihe ubi mgbe niile. Osisi apụl "Mma Bashkir" egosiwo onwe ya na àgwà ndị a nile - ị ga-ahụ nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche na foto, yana àgwà nke ịkụ ihe na ịkụ ihe na isiokwu a.
Nzuzo nke ihe ịga nke ọma cultivation nke apụl "onye mmeri"
Egwuregwu iche iche nke Apple na-adabere na ngwaahịa ya na uto ya dị iche iche meriri ezigbo onye mmeri a ma ama n'etiti ndị na-elekọta Europe. Ọtụtụ ndị na-ele ọtụtụ dị iche iche anya dị ka ezigbo nhọrọ maka mmepụta azụmahịa. Ke adianade do, ọ na-eme nke ọma na-agwakọta mfe nke cultivation ọnọdụ na elu zaa.
Characteristics na peculiarities nke cultivation nke "Apple" cultivar apụl iche iche
Osisi dị iche iche bụ ezigbo ndị nwe obere ubi, ebe ọ na-adịghị enwe ohere zuru ezu. Kolonovidnye ụdị mkpụrụ osisi a kụrụ nwere ike iji mpaghara ahụ mee ihe n'ụzọ dị irè, na mbụ nwere ike ibu ibu n'ime nnukwu ite ma n'otu oge ahụ jiri mmesapụ aka amị mkpụrụ. Otu n'ime oge oyi nke osisi apụl nke nwere okpueze na-asọ oyi bụ "President", nke mkpụrụ ya na-adaba ọ bụghị nanị na ọ dị elu, kamakwa ya na nha.
Otu esi emeso skaab na apụl
Scab bụ ọrịa nkịtị nke nwere ike imetụta osisi apple. Ọ na-esiri onye bi n'oge okpomọkụ ike ịnagide ọrịa a, mana ọ ga-ekwe omume. N'isiokwu a, anyị ga-enye ndụmọdụ dị irè na ndụmọdụ bara uru site n'aka ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ bụ ndị ga-enye ihe ọmụma banyere esi ewepụ skaab na apụl.
Olee otú esi emeso powdery mildew na osisi apụl
Na ọdịdị nke mycelium, na-akpalite mmepe nke powdery mildew, osisi ndị na-adịghị ike, na-efunahụ akwụkwọ na ovary, mkpụrụ ha na-ebelata, na ikpe ndị a na-eleghara anya, ọbụna na-eguzogide ntu oyi na-anwụ n'oge oyi. Ka anyị nyochaa egwu egwu dị egwu nke na-aga n'ihu, ihe ịrịba ama mbụ ya na osisi apụl ma gwa gị otu esi emeso ya.
Nzuzo nke ihe na-aga nke ọma nke apụl "Pepin Saffron"
Ikekwe, ọ dịghị onye na-elekọta ubi nke na-amaghị ụdị apụl dị iche iche dị ka "Pepin Saffron." Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-amị mkpụrụ na-ahọrọ ụdị dịgasị iche iche dịka ihe kachasị mma, na-esi ísì ụtọ, tọrọ ụtọ, dị mma ma dị mma, n'ihi na mkpụrụ ya n'ụdị ọ bụla na-ejide onwe ya.
Melissa: nkọwa na foto nke ụdị ndị kachasị ewu ewu ma na-elekọta osisi ahụ
Ezi nri nke cyclamen
Greenfinch mushrooms: nkọwa, uto, ntụziaka